Fikarohana momba ny firaisana Leslie Flint: Ny feon'ny mivantana mivantana, manambany sy manaja tokoa amin'ny alàlan'ny filazalazana voalohany ny fiainana any an-tany. Fiainana taloha ho an'i John Travolta - Fikarohana momba ny réincarnation
Trance Medium Kevin Ryerson ary ilay Fanahy lasa Ahtun Re
Ny mpamaky dia ny olona iray izay manana ny fanomezana nomen'Andriamanitra ny fahafahana hifandray sy hiara-miasa amin'ny fanahy. Ny ankamaroan'ny mpanorina ny fivavahana lehibe dia fanaovan-javatra.
Nomena fitahiana aho Kevin Ryerson, mpitsikilo manintona malaza eran-tany, izay naseho ao amin'ireo boky efatra an'ny Shirley MacLaine. Ny fomba fiasan'i Kevin dia miditra amin'ny fisaintsainana izy, na toy ny torimaso, sahala amin'ny torimaso ary manome alalana ny fanahy ratsy hampiasa ny tady feony hiresahana amin'ny olombelona. Niara-niasa tamin'i Kevin isam-bolana hatramin'ny 2001 aho.
Kevin dia manolotra torolàlana fanahy antsoina hoe Ahtun Re izay naneho ny fahaizan'ny fanaovana ny lalao tamin'ny fiainany tamin'ny fotoana ambony. Rehefa nifandray i Ahtun Re na dia niova aza ny feon'i Kevin, ny feony, ny accent, ny endrikendrika ary ny fitondran-tena. Ahtun Re dia manana vazivazy mampihetsi-po mampihetsi-po. Na dia novakiana tsara aza i Kevin, I Ahtun Re dia manana loharanom-pahalalana ensiklopolo izay tsy ananako na izaho Kevin.
Ahtun Re tsy afaka mifehy fotsiny amin'ny tadim-peo amin'ny feo avo, dia afaka mifehy ny vatana manontolo i Kevin. Rehefa nitarika ny fitsangatsanganana fiovan'ny fizahan-tany mankany amin'ny toerana arkeolojia Peroviana Machu Picchu i Kevin, dia ho nasain'i Ahtun Re nitafy jamba izy ary avy eo dia nitarika ny vondrona mpitsangatsangana ho an'i Kevin tamin'ny lalan'ny hantsana tery.
Ahtun Re dia nizara fa vokatra avy amin'ny fivoaran'ny olombelona izy ary ny nahaterahany farany dia tokony ho 3500 taona lasa tany Ejipta taloha, izay naha-jeneraly miaramila azy teo ambany fiambaran'ny Farao Akhenaten. Ahtun Re dia nitantara fa rehefa novonoin'ny fahavalo ny fianakaviany, dia nandà ny herisetra izy ary lasa pretra tao amin'ny tempolin'i Ejipta.
Ny fahasalamana ara-batana ao an-trano Daniel Dunglas | Uri Geller
Ny karazana medium hafa dia media ara-batana, izay manamora ny fahafahan'ny fanahin'ny olona manodina ny angovo sy ny zavatra. Iray amin'ireo fampitaovana ara-batana malaza indrindra amin'ny tantara i Daniel Dunglas Home (tononina Hume), izay namokatra ny fihetsiketsehana sy ny fividianana zavatra ara-batana, anisan'izany ny famoahana ny tenany.
Ao amin'ny asako, nambara fa reincarnated Home ho Uri Geller, izay fitaovana ara-batana malaza indrindra amin'ny fotoan'andro. I Uri dia mety ho fantatra amin'ny fandoan'ny sotro. Ny trano sy ny mpivarotra dia nianatra ireo mpahay siansa malaza tamin'ny androny. Ireo mpahay siansa ireo dia nahatsikaritra ny fihetsiky ny tranon'ny vatana | Mpivarotra eo ambanin'ny zava-misy ao amin'ny laboratoara ary ireo mpahay siansa ireo dia namarana fa ny zava-nitranga izay novokarin'i Home sy Geller dia tena izy.
Rehefa nanontaniako i Ahtun Re hoe maninona no afaka mamokatra izao zava-mitranga mahavariana izao ny Home and Geller nefa ny ankamaroan'ny olona tsy afaka, Ahtun Re nilaza tamiko fa noho ny sehatra angovo avo lenta no nahatonga ny fanahin'ny Home | Manana ny mpivarotra. Samy nanambara ny trano sy ny mpivarotra azy ireo fa tsy manam-pahalalana na mahazo an-tsaina ny fomba nipoiran'izy ireo. Ny tokantrano sy ny mpivarotra dia namintina fa ireo trangan-javatra ireo dia namboarin'ny fanahy ratsy, na dia tsy fantatr'izy ireo hoe iza ireo olona ireo.
Ny tranga famerenana indray an'i Daniel Douglas Home | Uri Geller, izay tohanan'i Urià Geller, dia hita ao amin'ny bokiko Born indray.
Uri Geller: “Niakatra teo an-damosin'ny vozoko ny volo”
Faly aho mizara fa rehefa niantso an-tariby an'i Uri aho mba hampahafantatra azy fa tamin'ny alàlan'ny asa niarahako tamin'i Kevin, dia fantatra fa izy no teraka tao amin'ny DD Home, dia nilaza tamiko izy hoe: "Niakatra tao an-damosiko ny volo." Taorian'ny herinandro roa nandinihana ny lalao taloha, nanaiky i Uri fa izy dia teraka tao amin'ny vatana vaovao ao an-trano ary nanome ahy alalana hampiditra ny Home | Geller tranga ao amin'ny my ateraka indray boky. Faly be aho afaka mifandray fa nanao ny volo hiakatra any an-damosin'ny iray amin'ireo mpanelanelana amin'ny saina sy malaza indrindra eto an-tany aho.
Ny fahasalamana ara-batana sy mivantana Leslie Flint
Tamin'izany dia nahaliana ahy manokana aho rehefa nahita momba ny asan'i Leslie Flint, izay nambara ho toy ny feon'ny mpampita feo mivantana be indrindra amin'ny tantara. Mifanohitra amin'ny mpamorona trance, toa an'i Kevin Ryerson, izay ampiasan'ny fanahy ny tadim-peo amin'ny alalàn'ny haino aman-jery mba hifandraisana amin'ny olombelona, ​​ny mpampita feo mivantana dia afaka mampiasa ny herin'ny fiainany hamela ny fanahy mifampiresaka amin'ny feony voajanahary amin'ny alàlan'ny fitaovana mahery vaika, boaty feo na fanamafisam-peo, fitaovana ahafahan'ny fanahy miteny mivantana amin'ny zanak'olombelona mivantana.
Tsy miasa irery ny mpampitambatra amin'ny ankapobeny. Izy ireo dia miara-miasa amin'ny vondron'olona izay mifanaraka amin'ny tanjona sy tanjona izay mizara ny angovo azy manokana hampitombo ny angovo ara-batana. Toy ny ekipa mpanao fanatanjahantena izay manohana ny mpilalao kintana azy ireo mba hahavitana tanjona iray. Ity vondron'olona te hanohana ny fihaonana amin'ny fihaonana ity amin'ny atao hoe série na faribolana. Mipetraka faribolana iray izy ireo mba hanampiana fanahy hifandray amin'ny olona iray ao anaty faribolana izay manana fanomezana lehibe indrindra, na angovo lehibe indrindra, amin'ny alalany.
Ny ankamaroan'ireo olona voarohirohy amin'ny fanaovana série na ireo faribolana ireo dia namantatra ny tenany ho fanahy ara-panahy, satria mandrisika azy ireo hamela ny fanahin'ireo olona nodimandry hifandray amin'ny velona. Ectoplasm dia teny ampiasain'ny Fanahy ara-panahy mba hamaritana ny angovo avelan'ny sain'ny ara-batana.
Namokatra Ectoplasm ny Danoà Ara-pitsaboana ara-batana Danemark, izay sary
Ilay sary nomena ny mety dia manome ny mazoto ara-batana Einer Nielsen (1894-1965). Ny fitaovana toy ny lamba fotsy manodidina ny vozon'i Nielsen ary mametaka ny takalony dia antsoina hoe ectoplasm. Ny mpampianatra taranja akademika izay mikaroka an'i Nielsen dia hita fa mitazona ny sandriny mba hiantohana fa tsy mampiasa elanelan-tànana na fetsifetsy tanana i Nielson, hamokatra ny zava-misy azy. Kitiho ny sary mba hanitarana azy.
Ny fahazazan'i Leslie Flint sy ny fisian'ny fanomezana ara-tsaina
Ny fampandrosoana ny Leslie Flint ho toy ny mpanamory ara-batana dia tsy malama. Ao amin'ny autobiographiany Feo ao amin'ny Dfiara: Ny Fiainako amin'ny Medium, Flint, izay nihalehibe tao amin'ny fahantrana tany Angletera nandritra ny World WI, dia nanoritsoritra ny fomba nampisy azy tsy nampoizina sy nampisy hery ny tenany ho fitaovana ara-batana. Mitantara ny tantarany amin'ny fomba tena mampihomehy izy. Tsy dia maro ny boky novakiako fa nahatonga ahy hihomehy mafy, nefa iray ihany izy ireo.
Mamelà ahy hizara traikefa iray izay niainan'i Flint tamin'izy nipetraka teo amin'ny faribolana iray an'ny Spiritualiste antsoina hoe Ramatoa Cook, izay nanana antony hinoany fa i Leslie Flint dia mety ho lasa mpamaky sarin'izao tontolo izao, na i Flint aza izany no sarotra nino. Nilaza tamin'ny faribolana i Ramatoa Cook fa notarihin'ny fanahy efa nandroso be antsoina hoe Shu-Shu izy, izay lasa pretra avo tao amin'ny tempolin'i Ejiptiana taloha iray natokana ho an'ny andriamanibavy Ejiptiana.
Taorian'ny Leslie, tamin'ny haavon'ny 5 tongotra sy 2 santimetatra, nipetraka teo amin'ny faribolan-dRamatoa Cook nandritra ny herintaona mahery, dia tsy nampoizina i Ramatoa Cook mihitsy. Ny torolàlana ara-panahiny dia Shu-Shu avy eo dia niresaka tamin'ny alàlan'i Rtoa Cook ary nilaza izy fa haneho fombafomba fandihizana masina izay nataon'i Shu-Shu, ho mpisoronabe tany Ejipta fahiny.
Ilay Ejiptiana fanahy miahy Shu-Shu dia manao dihy amin'ny alàlan'i Ms. Cook
Ao amin'ny autobiographiany, Leslie Flint dia mamaritra ny toe-javatra:
"Ms. Lehibe lavitra noho ny maha rajako azy i Cook, malalaka kokoa izy tamin'ny beam-bava ary ny tratrany dia tany amin'ny Tany Neny.
Nahatsapa alahelo, ity olo-malaza lehibe ity dia nitsangana avy teo amin'ny sezafiandrianany ary nifindra ho eo afovoan'ilay faribolana izay nanombohany nandihizana.
Nofatorany ny valahany ary nofeheziny ny sandriny, nandritra ny fotoana nihiany hoe inona no zava-betaveta tamiko nefa nambaran'ny hafa ho Ejiptiana fahiny izy. Ny renirano be dia be nipoitra tampoka rehefa nitombo ny herin'ny dihy, voalohany amin'ny lafiny iray ary avy eo amin'ny lafiny iray, ary ny sandriny dia nanenona toy ny laona amin'ny horita feno be.
Te-hijery lavitra aho, menatra an'i Ms. Cook, fa andramo satria mety nionona tamin'ny fahitana ilay masoko.
Fantatro fa hitranga izany, niezaka mafy ny hampitsahatra izany aho, saingy nanomboka nihomehy aho, tamin'ny voalohany resin'ny herin'ny maizina dia hatanjaka amin'ny andiam-panala mitoloko, fa raha mihantona sy manenona ary mandeha ny fidoradrano dia lasa tsy mahafehy ny tena intsony aho. ary dia nihomehy sy nihomehy aho mandra-pahoriana ny ranomasoko.
Ny somary nanaitra sy tezitra ny mpikambana hafa ao amin'ny faribolana, dia nihomehy foana aho mandra-pahatongan'ny farany dia nivoaka avy tao amin'ny tsangany i Rtoa Cook ary tamin'ny fijery izay nahamaina ahy lavenona nipetraka teo amin'ny seziny.
Taty aoriana, rehefa nahita ahy teo am-baravarana mialoha i Ramatoa Cook dia tsy nahagaga ahy fa niteny izy, somary tsara fanahy, noho ny toe-javatra, 'tena mieritreritra aho, ry malala, mbola tanora loatra ianao ary angamba sanganasa loatra hanohizanao ny fampiroboroboana anao izao. Tsara kokoa raha tsy tonga eto ianao. ' Nosokafany ny varavarana ary hitako fa avy be ny orana any ivelany…
Fa tsara fanahy sy mamela heloka Andriamatoa Cook, hanalefaka ny tsofoka efa nataony tamiko, nametrahany ny sandriny manodidina ahy tamin'ny fikasana mazava ho ahy hanoroka veloma feno fitiavana. Nanohina ahy ny fahalalahan-tananany, nefa, tsy sahy nanery an'io tratra be voninahitra io, dia nihataka aho ary niaraka tamin'ny fitsangantsanganan'ny 17 taona maro be.
'Tonga ao an-tsokosoko ianao, ry oaf! Nitomany mafy izy, ary nifona tamim-pialan-tsasatra aho tamin'ny alina tao anaty orana.
Efa nandray ny fanapahan-kevitro aho. Hafoiko ny fandrosoana rehetra amin'ny fiezahana ho mazoto. ”
Ny ray aman-drenin'i Leslie Flint dia nandao azy sy ny tanora Leslie niaina fahagagana Clairvoyance
Leslie ao amin'ny 4 Taonan'ny Mompera sy ny Rainy
Andao atombohantsika hatramin'ny voalohany mahakasika ny fampandrosoana ny fahalalahan-kevitr'i Leslie Flint. Flint dia teraka tao 1911 tany Angletera. Nandao ny fianakaviany ny rainy, tamin'izy mbola kely sy ny reniny, izay nifidy ny hiara-misalahy amin'ny mpiara-miasa aminy, dia namela an'i Leslie hitoetra miaraka amin'ny reniny. Tahaka izany, nobeazain'ny renibeny mpitaiza tamin'ny fahantrana izy.
Ny traikefa ara-tsaina voalohany nataony dia fony 7 taona izy, nandritra ny Ady Lehibe Faharoa I. tany amin'ny lakozian-drenibeny i Leslie rehefa nandeha nitomany ny nenitoany, nizara fa maty ny vadiny i Alf. Tsy mbola nihaona tamin'i Alf i Leslie. Miaraka amin'i Nell mitondra ny fananan'i Alf ny miaramila iray. Avy eo i Leslie dia nahita miaramila faharoa nandeha an-tampony izay toa nalahelo be, izay nanomboka nisintona ny sandrin'i Aunt Nell mba hisarika ny sainy, na dia toa tsy fantatra tanteraka tamin'ity lehilahy ity aza i Nell. Tampoka teo dia nanjavona tanteraka ilay lehilahy. Taty aoriana, rehefa nasehon'i Nell an'i sarin'i Alflie dia sarin'i Alflie, dia nahafantatra azy ho miaramila malahelo izay miketrika ny sandrin'i Nell. Rehefa nambaran'i Alf tamin'i Nell sy ny renibeny izany dia samy nilaza tamin'i Leslie izy fa handainga. Rehefa nanohy ny teniny i Leslie dia nilaza izany fa izy no nomen'ny renibeny azy "clout" mba hanasaziana azy noho ny fanolorany tsy marina.
Tamin'ny tranga hafa dia rehefa nody avy tany an-tsekoly i Leslie, dia naheno feo tany an-dakozia izy. Ny feo iray dia ny an'ny renibeny ary ny iray dia feon'ny vehivavy izay tsy fantany. Raha niditra tao an-dakozia i Leslie dia nahita ilay renibeny izay nanjaitra nangina sy nijoro teo anilany, dia nisy vehivavy nanana molole lehibe teo amin’ny voany. Ity vehivavy niaraka tamin'ny mola ity dia nanjavona.
Rehefa nanontanian'i Leslie ny renibeny hoe inona no nanjo ilay vehivavy niresahany, dia namaly izy fa irery izy ireo ny tolakandro teo ary tao an-tsaina i Leslie. Rehefa nilaza i Leslie fa nanana mola be teo amin'ny vavany ilay vehivavy, dia notohizan'ny renibeny indray izy. Nasehony avy eo fa ilay vehivavy atao hoe Leslie dia nofaritanina Rtoa Pugh, izay nalevina volana iray talohan'izay. Nianaran’i Leslie tsy hiresaka momba ireo olona nanjavona. Ny fanomezam-pahasoavana ara-tsaina raha te hahita olona fanahy dia antsoina hoe clairvoyance.
Leslie Flint dia mankafy ny fiderana avy amin'ny mpampianatra azy, Andriamatoa Lewis
Tao amin'ny autobiografika nataony dia nanaiky i Flint fa mpianatra nahantra izy, fa iray kilasy nahalehibe azy dia ny zavakanto. Ny mpampianatra ao an-tsekoly, Andriamatoa Edwin Lewis, dia nahatakatra ny talenta nataon'i Leslie ary nampahery ny fivoarany tamin'ny maha-mpanakanto azy. Nanompo tany am-boalobon'ny Ady Lehibe I Andriamatoa Lewis izay niharan'ny fanafihana entona misy poizina ka nahatonga ratra tamin'ny havokavoka izay niafara tamin'ny naha-kohaka azy nandritra ny androm-piainany. Rehefa maty izy dia nomena fandevenana miaramila Andriamatoa Lewis.
Leslie dia lasa mpankafy ny horonantsary tsy manam-paharoa Star Rudolph Valentine
Fony vao 12 i Leslie dia nahita asa nanao asa an-trano. Miaraka amin'ny vola azony dia handeha amin'ny sarimihetsika izay tian'i Leslie izy sy ny renibeny. Rudolph Valentino dia iray amin'ireo kintan'ny sarimihetsika mangina tiany indrindra. Ao amin'ny roa amin'ireo sarimihetsika malaza indrindra ao Valentino, Ilay Sheik ary Ny Zanak'olona Sheik, Dia nilalao ny ampahany amin'ny Arabo. Misy sary an-tsary an'i Valentino ao anaty akanjony maintso nomena ho amin'ny ankavanana.
Tamin'ny taona 13, rehefa lehibe ny tsy fananana asa taorian'ny ady tany Angletera, dia nahazo vahana tsara i Leslie Flint nahita asa mahazatra ho toy ny mpiasan'ny fasana iray. Ny mpanara-dia azy, Hobbs, dia lehilahy manify sy be antitra ary mahalala olona — izay rehetra nitateran'i Leslie dia nanantona ny "rantsantanana boney" mba hanamafisana ny fahendren'ny fanambarany.
Fony vao 15 i Leslie dia telo no zava-dehibe nitranga tamin'ny fiainany. Ny iray dia ny fahafatesan'ilay mahery fo Rudolph Valentino, izay maty tamin'ny faha-31 tamin'ny taonany noho ny fahasarotana amin'ny fery mihanaky ny vavony.
Nitranga ny tranga faharoa raha mbola teo am-panaovana ny asany tao amin'ny fasana i Leslie. Tsy nampoizina fa nahita ny fasan'ilay mpampianatra malalany, Andriamatoa Edwin Lewis. Hitan'i Leslie fa tsy atao ambanin-javatra ny fasana, ka nofeheziny nanodidina ny vatolampy ny zavamaniry ary nasiany voninkazo tamin'ny fasana. Taty aoriana ny andro, ny mpanara-maso azy dia niresaka momba ny Espaniola. Notsipahin-dramatoa Hobbs ny mpanaraka ara-panahy, ary nanamarika fa fandaniam-potoana kely ny ezaka ataon'izy ireo. Nizara izy fa ny vadiny dia nikasa ny hivory fivoriana ara-panahy tamin'iny alina iny tao amin'ny Quakers Friends 'Meeting Place. Hoy i Hobbs tamin'ny vadiny: "Ireo fanahy mpandray fanahy ireo dia arakaraka ny volanao, ry omby malala!"
Ren'i Leslie momba ny fanahy ratsy fa tsy mbola nanana fotoana hihaona tamin'izy ireo akory izy. Nanapa-kevitra izy fa hanatrika ny fivoriana iny alina iny.
Ao amin'ny Age 15, nanatrika ny fivoriana voalohany ara-panahy i Leslie Flint, izay nandefasan'i Atoa Lewis sy Rudolph Valentino hafatra ho azy.
Ramatoa Anne Johnson dia mpamantatra trance fanta-daza fa izy no lohandohany tamin'ny fihaonana. Nipetraka tao ambadiky ny efitrano teo akaikin'ny varavarana i Leslie, mba handosirany haingana ny Fanahy Masina raha nahita ny fizotrany natao izy.
Ramatoa Johnson, teo an-sehatra, dia niseho fa matory eo amin'ny sezany. Gaga i Leslie rehefa nitsangana ity vehivavy natory ity ary nanomboka niteny tamin'ny feo malefaka. Leslie nanontany tena raha atao hoe vehivavy i Ramatoa Johnson izay namboarina ho vehivavy. Raha ny tena izy, dia nijery saina i Ramatoa Johnson ary nandefa lehilahy maty izy nanao kabary momba ny fiainana mandrakizay.
Avy eo, nivoaka avy tao amin 'ny trance i Ramatoa Johnson ary niteny tamin'ny feon' ny tenany manokana sy voajanahary ary mahafinaritra. Nilaza tamin'ny vehivavy iray izy tao amin'ny mpihaino fa nijoro teo akaikiny ny vadiny efa maty ary te hampita izy fa tsy manana fanaintainana mahatsiravina intsony ao amin'ny tratrany izay vao niseho akory. Nanome filazalazana momba ny vadin'ity vehivavy ity ny Ramatoa Johnson, izay nasehon'ilay vehivavy fa marina.
Nanaraka izany dia nanondro mivantana an'i Leslie i Ramatoa Johnson ary niteny hoe: "Te hiresaka amin'ilay tovolahy ao anaty laharana aoriana aho." I Leslie dia "voapotsitra" noho izany ary nanantena izy fa hiresaka tanora tanora hafa, fa raha mijery manodidina dia nahatsapa izy fa izy irery no zatovo teny akaiky teny.
Avy eo Ramatoa Johnson dia nilaza tamin'i Leslie hoe: “Misy lehilahy iray eto izay te-hisaotra anao noho ireo voninkazo napetrakao tamin'ny fasany androany maraina. Lazainy amiko fa mpampianatra izy ary Edwin Lewis no anarany. Azonao ve izany? Nomena fandevenana miaramila izy. ” Ramatoa Johnson koa dia nanome famaritana ara-batana marina an'i Andriamatoa Lewis.
Avy eo Ramatoa Johnson dia nilaza fa ho fanampin'Andriamatoa Lewis, dia misy Arabo mijoro eo akaikin'i Leslie, izay, hoy izy, dia nitazona fanahy ho an'i Leslie. Nanampy izy fa tsy tena Arabo io fitarihana fanahy io fa olona manao akanjo Arabo. Nambaran-dRamatoa Johnson fa ity lehilahy Arabo iray ity dia maniry an'i Leslie hivoatra ho mpanelanelana amin'ny fanompoana ny zanak'olombelona. Namintina Ramatoa Johnson tamin'ny filazany hoe: "Amin'ny ho avy tsy ho ela dia hanao asa mitovy amin'ny ataoko ianao ary ho lasa mpanelanelana tena malaza ianao." Ity no zava-dehibe fahatelo nitranga rehefa 15 taona i Leslie.
Nampiaiky volana an'i Leslie ny fahalalan-dRamatoa Johnson momba ny fikarakarany ny fasan'Andriamatoa Lewis, saingy gaga izy tamin'ny filazany fa ho lasa mpanelanelana malaza izy, satria tsy fantany ny fananana fanomezana ara-tsaina, hafa noho ireo tranga roa rehefa nahita olona nanjavona tamin'ny fahazazany izy. Na izany aza dia nanjary tsy tapaka tamin'ny fivorian'ny Spiritualists izy. Indray hariva, nisy vehivavy iray, izay nanatri-maso ny fanambarana nataon-dRamatoa Johnson fa ho lasa mpanelanelana malaza i Leslie, dia nanontany izay hataony momba izany. Namaly i Leslie: "Tsy misy, tsy psychic aho, ka inona no hataoko amin'izany.?"
Namaly ilay vehivavy fa nandray faribolana, izany hoe seona, tao an-tranony. Nanasa an'i Leslie hiditra ao amin'ny tarika izy. Ity vehivavy ity dia Rtoa Cook, izay nilaza teo aloha fa notarihin'ny fanahy manandratra antsoina hoe Shu-Shu, izay voalaza etsy ambony.
Rudolph Valentino nandefa Hafatra ho an'i Leslie tamin'ny alàlan'ny vehivavy iray tany Alemaina
Tamin'io alina io, rehefa avy nihaona tamin'i Rtoa Cook, i Leslie dia nody tany an-trano mba hahita taratasy iray niresaka taminy nipetraka teo ambonin'ny lamborofoan'ny mason'ny renibeny. Nisy taratasy alemà vita tamin'ny alemà teo amin'ilay taratasy. Leslie tsy nisy nahalala tany Alemaina.
Raha namaky ilay taratasy dia nahita i Leslie fa avy amin'ny vehivavy iray tany Munich nipetraka tamin'ny faribolana ara-panahy nandritra ny taona maro. Tao anatin'ny fotoam-pivoriana farany izay dia nilaza ny mpampita vaovao fa nisy fanahy izay naneho ny tenany ho Rudolph Valentino. Io toe-tsaina io dia nanome ny anaran'i Leslie sy ny adiresiny tany Angletera ary nangataka azy hanoratra amin'i Leslie mba hampita ny hafatra fa tsy maintsy hamolavolain'i Leslie ny maha olom-pantatra azy mba ho fanompoana ny olombelona. Dia fantatr'i Leslie fa tsy maintsy i Rudolph Valentino izay noresahin'i Reny Johnson raha nitantara ilay toe-tsaina niakanjo arabo izy.
Nataon'i Leslie fa ahoana no hahafantaran'ity vehivavy ity tany Alemana ny anarany sy ny adiresiny satria zaza tsy fantatra izy, tsy nahay nandamoka tamin'ny ady Britanika. Tamin'ny farany, i Leslie dia namarana fa ny maty dia afaka miteny amin'ny alàlan'ny haino aman-jery.
Ireo mpanampy ny fanahin'i Leslie dia nanangana latabatra mavesatra hanehoana ny herin-tsain'i Leslie
Ity taratasy ity dia nanatanjaka ny fahatapahan-kevitr'i Leslie hanatrika ny faribolana an-dRamatoa Cook. Rehefa tonga izy dia nipetraka tamin'ny latabatra lehibe sy mavesatra ny mpanatrika enina. Nihamaivamaivana ny jiro ary rehefa afaka folo minitra dia nisy feo mafy tonga re avy teo afovoan'ilay latabatra. Ramatoa Cook nilaza fa ny rap dia midika fa vonona hifandray ireo fanahy. Ny fomba fiasan'ny fifandraisana ara-panahy ao amin'ity faribolana ity dia nataon'ny mpikambana iray avy amin'ny faribolana nanerana ny abidia ary ireo fanahy dia mikepoka eo ambony latabatra mba hanondroana rehefa nisy taratasy iray nanambara fa te hampiasa azy ireo. Amin'ny fanaovan-javatra miverimberina hatrany dia mety handefa ny hafatr'izy ireo ny fanahy.
Hafatra iray dia fanontaniana, nanontany ireo mpikambana ao amin'ny faribolana raha toa ka te hahita ny halehiben'ny herin'ny faribolana izy ireo noho ny fisian'i Leslie. Nilaza ny rehetra fa tiany. Tampoka teo, nisy ilay latabatra lehibe sy mavesatra natsangana ary nitsangana teo amin'ny tendrony iray. Leslie Tsy nino ny masony. Nisy fanahy avy eo nampita fa hiara-miasa amin'i Leslie izy ireo hanampy azy amin'ny fampivelarana ho feon'ny mpampita feo.
Leslie Flint dia lasa Mediam-peo mivantana amin'ny feo ary nisedra ny mpikaroka
Leslie Flint mampiseho ny fahalalany amin'ny rano miloko ao am-bavany, paompy amin'ny fitrany sy ny sandriny.
Tamin'ny farany, Leslie Flint no lasa feon-kira mivantana malaza indrindra nandritra ny fotoana rehetra, naneho ny fihetsiketsehana ny fahaizany tao amin'ny efitrano lehibe indrindra tany Angletera. Nampahery ireo mpanao fanadihadiana i Flint mba hanandrana ny fahaizany mivantana ny feony. Nasehony, ohatra, ny fahaizany tamin'ny rano miloko teo am-bavany ary tamin'ny kasety adesifika nanakombona ny molony mba hivoahana fa ny feo vokariny dia avy amin'ny tadim-peo ara-batana. Ankoatra izany, mandritra ny fotoana iray, ny sandriny dia na fehezina tamin'ny seza na notazonin'ireo mpiara-miasa aminy, mba hialana amin'ny hoe manodino fitaovana isan-karazany izy.
Fanampin'izany, teleskopera na sensor avy amin'ny mpanara-maso dia ampiasain'ny mpikaroka hijery an'i Flint raha namokatra ny feo mivantana izy. Ny taratra fitateram-batana dia vokarina amin'ny loharano hafanana na angovo. Ny teleskopera infrainaly dia naneho ny boaty feo fanamafisam-peo na éctoplasmika izay ampiasain'ny fanahy hifandraisana. Tokony ho roa tongotra teo amboniny ary somary miankavia miankavia ny lohan'i Leslie. Mifanaraka amin'ny fahitan'i Flint azy manokana hoe aiza no misy ilay boaty feo éctoplasmic mandritra ny fahaizany. Tsindrio ireo sarin'ny mpikaroka manandrana an'i Flint mba hanitarana azy ireo.
Tamin'ny taona 60, Leslie Flint dia hita taratra fa taorian'ny taona 35 ny fampitaovana feo mivantana dia mbola tsy azony izay nahatonga an'io fisehoan-javatra io. Ny fahatsapana sasany dia nomena nandritra ny fotoam-pivavahana ho an'ny haino aman-jery izay nahafantatra ny tenany ho nodimandry French Physiology Profesora Charles Richet, izay nanompo ny Filohan'ny Fikambanana Fikarohana Ara-tsaina any Londres manomboka any 1905. Richet Hoy izy:
“Ny zavamananaina rehetra dia manana singa fantatra amin'ny hoe ectoplasm izay hery mahavelona, ​​ary ny mazoto ara-batana dia manana be lavitra noho ny ankamaroan'ny olona. Mandritra ny fotoam-pitsaboana io zavatra io, izay antsoina indraindray hoe 'hery' dia nalaina avy tamin'ilay antitra sy namboarin'ireo fanahy izay mahalala ireo zavatra ireo ho famolavolana taova ara-batana izay fantatra amin'ny anarana hoe 'boaty feo' na indraindray ilay hoe ' hanafina. ' Ny fanahy mifampiresaka dia mifantoka amin'ny eritreriny ao anaty boaty feo izany ary mamorona matetika na misy fantsom-baravarana izay mahatratra ny sitters amin'ny Tany ho toy ny feo.
Leslie Flint dia mampiseho ny fahaizany fa ny mpahay siansa dia mijery ny boatin'ny feon'ny horita ectoplasmika eo ambonin'ny lohany amin'ny alàlan'ny tsindrona tsy mivoaka
Ny profesora Richet dia nanondro ihany koa fa ny toe-tsaina mifampiresaka dia tsy maintsy mampidina ny fetrany amin'ny alàlan'ny ambany any amin'ny tany ary mahatadidy ny feon'ny feony mandritra ny androm-piainany sy ny fahatsiarovana azy ireo ny zava-mitranga izay hanaporofo ny maha izy azy. izay maniry ny fanahy mba hifandraisana. Raha mahomby ny fanahy mifampiresaka, dia ho toy ny feo teo aminy ny feo tamin'ny fotoana niainany teto an-tany.
Ny Jiro dia mifangaro amin'ny fampiasana ny Ectoplasm, noho izany Voices ao amin'ny Dark
Ny ankamaroan'ny haino aman-jery dia tokony ho ao amin'ny efitrano maizina mba hisehoany ny fahatongavan'izy ireo. Noho ny antony tsy mazava, ny hazavana mamiratra dia manelingelina ny fampiasana ny angovo mahavelona na ectoplasm. Angamba ny haizina dia mamela ny zavaboary ara-panahy mora kokoa kokoa ary noho izany dia mampiasa ectoplasm. Izay no antony nahatonga ny oniversite Flint, Voices ao amin'ny Dark.
Ny filazalazana ny tanana voalohany na ny any ankoatra
Ny firaketana an-tsarimihetsika 500 dia natao tamin'ny haino aman-jery mivantana an'i Leslie Flint izay niresaka tamin'ny havany velona tamin'ny feo azy, ireo havany maty. Ankoatry ny fizarana fahatsiarovana amin'ireo havany velona, ​​ireo fanahy ireo ihany koa dia namariparitra, tamin'ny an-tsipiriany hoe manao ahoana ny fiainany any amin'ny tontolon'ny fanahy. Ireo kasety ireo dia naverin'i Neville Randall, izay namoritra ny filazalazana ny tontolon'ny fanahy ao amin'ny bokiny Life aorian'ny fahafatesana. Ireo kaonty ireo no famaritana mazava indrindra momba ny tontolon'ny fanahy izay nihaona tamiko ary hizara ireo lahatsoratra manaraka.
Rudolph Valentino amin'ny fiainana taloha an'i John Travolta
Tamin'ny alàlan'ny fiarahako miasa amin'i Kevin Ryerson, dia nohamafisina fa natsangana indray i Rudolph Valentino ho mpilalao sarimihetsika John Travolta. Raha tianao ny hahafantatra bebe kokoa, masìna ianao, mankanesa any:
Raharaha Reincarnation an'i Rudolph Valentino | John Travolta
Ny filazalazana voalohany momba ny fiainana aorian'ny tanana
Alf Prichett mamaritra ny zavatra niainany tamin'ny fahafatesana nandritra ny WW I sy ny niainany ny fiainana any an-danitra
Ted Butler dia novonoina tamin'ny kamiao iray, manatrika ny fandevenana azy, lasa fanahy mifehy ny tany izay voavonjy avy amina vehivavy iray ao anaty fiara
Alfred Higgins, mpanao sary hoso-doko iray, mandao ny mpitaingina iray, miaina ny fiainana aorian'ny fahafatesana ary mandray ny tari-dalany mankany amin'ny pub
Rose, ilay mpivarotra voninkazo, dia mamaritra ny zavamaniry, biby, fialamboly, maritrano, akanjo, asa, fanambadiana ary zanaka any an-danitra. Manoro hevitra izy fa tokony hiandrandra ny fahafatesana avokoa isika rehetra
Terry Smith, izay maty tao anatin'ny WW I Rehefa notapahin'ny Nazia ny kapoakan'ny britanika, dia nanoritsoritra ny zavatra niainany tany an-danitra, Cat Cat Telepathy ary Komity mandray olona